Nge lacquers ungakha isivikelo of flooring sokhuni, kodwa ukunikeza imikhiqizo i ukubukeka ekhangayo futhi colorful kakhulu. Njengengxenye wabo - eziningi izinto ezahlukene ukuthi ukuvikela ubuso kusukela imiphumela emibi acid kanye alkalis. nazo akuvumelekile ukuthuthukisa ezindaweni sokhuni isikhunta athile kanye nesikhunta.
Lacquers ngokuvamile esetshenziselwa evele ezahlukene, kodwa ngokuvamile amboze kuyinto ebusweni lokhuni. Namuhla, esinye Izingxube ethandwa kakhulu futhi iyatholakala kubhekwe ukuvenisha alkyd. Umkhiqizo ine ukusebenza ephakeme awunankinga yokwenze izinkuni.
Varnishes alkyd - a izixazululo ezahlukene zokwenziwa alkyd inhlaka e ezihogelwayo. Phakathi izakhiwo - adhesion kakhulu futhi ukumelana namanzi.
Ngemuva omiswe, laba basebenzi unikeze enamathela eqinile, obala futhi kanzima kakhulu. Kukholakala ukuthi ukuvenisha alkyd bome eside. Nokho, imikhiqizo yesimanje, ezazihlanganisa izithasiselo ekhethekile asetshenziswa ngesikhathi omiswe ephelele encishisiwe kakhulu.
Ngemva solidification sokugcina ingxube eziguqulelwa alkyd enamathela isicwebezelisi. Indaba ukuthi camera nge ungqimba lacquer kuyinto elivikelwe ngokuphelele nanoma yimaphi ezishukumisa. Ukusebenza alkyd Izingxube silula - ukuvenisha alkyd obukhulu anele ezinhle ukugijima ebusweni futhi yakha ifilimu obukhulu. Le filimu ingase ibe matte noma ecwebezelayo.
Ngokuvamile, lezi izingoma zivame kakhulu esetshenziselwa kokuqeda imikhiqizo izinkuni. Lokhu kungaba uphayini, ngesihlahla sonwele saseYurophu emi, oki. Futhi, lezi zakhi ivame ukwembozwa flooring. Iningi labo othenga kubo, esetshenziselwa ukwelapha phansi lokhuni noma amapulangwe aphansi.
Ukwakheka mkhiqizo ngempela ekhona resin alkyd njengendlela base. Kuvame misela ngezinto zemvelo - uwoyela yefilakisi noma ukhuni. Eyesibili eqakathekileko yilezo ezihogelwayo. Futhi kule kungathola ezihlukahlukene fatty acid.
Lapho alkyd ukuvenisha zibe yizinkuni soaks ku isakhiwo ukungena nakwamanye amazwe, ngenxa yokuhambisa lezi kumakhemikhali awuketshezi kwandisa amandla afinyelela ekujuleni. Kusho ugxile ayikajuli futhi kungase kugcizelele kahle ubuhle kwezinkuni.
Ngenxa yalaba izingoma izici alkyd kabanzi kokuphothula umsebenzi ngaphakathi nangaphandle. varnishes parquet zikuvumela ukushintsha ukubukeka abesilisa nabesifazane cishe angaphezu ukuqashelwa. Ngalezi Izingxube bengathola nemibala ajulile yabo bonke shades, egcizelela parquet ukuthungwa ekhethekile.
Izici ukwakhiwa alkyd
Lezi izingoma abanalo nesincintisana ukumelana ngokuzumayo lokushisa izinguquko. Futhi kule isihlahla ayitsintseki ushintsho amazinga nomswakama. Ungawesabi enamathela ngesisekelo lezi lacquers vibration imithwalo ehlukahlukene.
Ngoqobo ulahlekile ngokuphelele izakhiwo ingcina esivela neminye imikhiqizo upende. Ngemva ingxube sisetshenziswa, indlela uzoqala cwilisa ubhoboza ukhuni futhi alikho slot phansi. Lesi sici ikuvumela ukuba bayakhohlwa floorboards creaking futhi imisindo ehlukahlukene - lokhu kuthinta varnishes ungaphumi lapho ifakwa emanzini.
Noma yimuphi ukuvenisha alkyd efanelekayo onqenqemeni amapulangwe aphansi. Ungasebenzisa futhi ngokuphepha imikhiqizo efana Ukushisa underfloor, izibuya elintantayo, zonke zokhuni naphansi. Ayikho indlela engcono flooring ukuthi senziwa yamadwala ezingezwakali ukuthi ngokushesha basabela noma yiziphi izinguquko esimweni sezulu.
Ukukhuluma ngezinzuzo, ungakhohlwa mayelana nokushiyeka babe upende alkyd. Izibuyekezo yokuntula ikakhulu ngenxa inqubo eside omiswe. Ngokwesilinganiso, kudingeka okungaphezu kokubona ngosuku. Yingakho ngokushesha ngemva ungqimba isicelo kudingeka ukuvula amafasitela. Izibuyekezo bathi ngeke kusheshiswe umsebenzi.
Enye ingqinamba - imibimbi, uma ngesikhathi sebethule master ukubeka obukhulu khulu. enamathela Ideal atholakala uma ngamunye 1 m 2 ngeke isetshenziselwe ezingaphezu kuka-120 g umkhiqizo.
Njengoba for ukuqina, kuba ongaphakeme zibe yizinkuni. Ngaphezu kwalokho, ukuphila umgwengwezi esekelwe ukuvenisha alkyd uneminyaka engu 2-3 kuphela. Ngakho-ke, ngokuvamile isetshenziswa hhayi ocansini, kodwa ukusebenza ku ifenisha noma izindonga.
Best ukukhiqizwa ubuchwepheshe
Kuyinto ethandwa kakhulu wonke eziphethe imakethe yomhlaba wonke upende kanye varnishes kwaba ukuvenisha urethane alkyd. Lokhu Ukwakheka Ushintshe okuyinto yayiphawuleka ngokuthambekela ukusebenza high. Ukukhiqiza inqubo esekelwe inqubo yokuthola izinhlelo zamagama uralkidov. Phakathi zamagama izingxenye uxhumano nomsebenzisi polyurethanes ekhethekile.
Umthelela lokhu ukuguqulwa kuphezulu kakhulu. polyurethanes Ngenxa kakhulu ukwazi ukunciphisa omiswe isikhathi. Manje kuba amahora angu-12. Intengo yale mikhiqizo cishe nsé izindleko kakhulu ezivamile alkyd analogue.
Alkyd upende matt
izingoma ezinjalo zihlukaniswe matte futhi ecwebezelayo, yize lokhu sigaba ngempela okunemibandela. Matte ingxube unika ebusweni non-shiny. Kuyinto kancane ezingcolile, akusiyo kubonakala uthuli. Kukhethwa lolutsite - kungcono nje indaba ukunambitheka. Amakhemikhali ukwakheka kanye izici mkhiqizo akuhlukile isicwebezelisi.
Omunye ukwakhiwa wokuqala esekelwe alkyd, okuyinto kuveza eRussia, - ukuvenisha alkyd PF-231. Lo mkhiqizo kahle isicelo kunoma izinhlobo evele. Le filimu yalesi thuluzi ngempela kucocekile. Lona Inzuzo enkulu yalo uphawu. Kodwa-ke lo mkhiqizo kanye nobubi obuthile. Akwanele enamathela kanzima okungukuthi ngokwenyama abanakukwazi ukuhlanganyela emsebenzini iminyaka engaphezu kuka-2-3 ubudala zesitezi lokhuni. Kunoma iyiphi enye ebusweni enamathela eshalofini yokuphila iphezulu kakhulu.
MCH-0163 - laqanjwa ezimbili ingxenye ngesisekelo parquet lacquer kanye hardener ekhethekile ene-asidi. Uma uqhathanisa lesi imoto nge PF-231, kukhona ukusebenza ngcono kakhulu. izici engeziwe kanye nezinzuzo - a ukumelana umswakama, ukumelana nokuhuzuka. Phakathi amaphutha - umthelela ongaphakeme ukuba elangeni, okubangela ebusweni mnyama. Futhi, ifilimu akanayo kuyaqina okwanele. Smell - ebukhali kakhulu.
EP-2146 - enye ingxenye alkyd ukuvenisha ephakeme kunaleyo ezinye izimpawu, izici. Njengoba ukulungisa ingxenye lapha i resin epoxy. Lokhu grade has ubulukhuni okusezingeni eliphezulu izici, umswakama ukumelana, ukumelana isinyathelo athile. Phakathi izicelo kunokwenzeka - a ukuvenisha parquet alkyd. Ungasebenzisa futhi umkhiqizo ukuqedela izinto zokhuni ahlukahlukene.
Isenzo alkyd lacquers
Ukuze uthole ebusweni izinga kakhulu, kubalulekile ukusebenzisa ukwakheka e ezelekene. Ngokuvamile - 2-3. Ngakho, ungqimba ngamunye selibekiwe kuphela ngemva odlule wabuna ngokuphelele. Ukusetshenziswa ngaleyo ndlela kufanele kube ngu-75 amagremu per 1 m2. Ukusetshenziswa kwemikhiqizo enjalo upende imali izinga ebusweni hhayi ngaphezulu - yehlisa amandla futhi kulungiselelwa isikhathi.
Njengoba uketshezi lezi lacquers isicelo imimoya amaminerali. Ngemva kwengoma lisetshenziswa ebusweni, uketshezi ngeke shabalala ngokushesha. Lapho yonke imimoya amaminerali shabalala, isebenze izinqubo polymerization. Basabela kanjani kule imvelo kwenzeka ngokusebenzisa izibopho zamakhemikhali molecule inhlaka.
Ekuqaleni, ukuvumelana kwezincwadi ifilimu lizofana into efana ne-glue. Khona-ke ngemva 9-12 amahora angu ezingeni lokushisa elifanele kanye nomswakama ebusweni ngeke congeal. Ubukhulu ngesikhathi solidification ingahluka kancane wehlise. Kuya ngokuthi ingxenye kuphela ayahwamuka. ukuvenisha ngalinye ingaqukatha esilinganayo kuphela. Kusho equkethe imimoya amaminerali ngaphansi abe ubuthi ongaphakeme.
Kubalulekile ukuchaza ngokucacile ukuthi ungawukhipha kanjani ikusasa izosetshenziswa egumbini lapho isicelo umgwengwezi lacquer wenziwa. Nge ngalo mbandela wokuba leyo ukuvenisha lisetshenziswa phansi Boden, kakhulu, bangaki abantu kuyohlale egumbini. Ngezinye imithwalo eliphezulu, alkyd ukuvenisha kungcono hhayi ukukhetha, futhi uthenge okuthile amanzi-based.
Kungcono alkyd izingoma efanelekayo kulabo evele okuyinto ngeke ibe ukuchayeka olwalwenza kanye lokukhanda. Khona-ke ebusweni ingahlala isikhathi eside. Kungahlali amathuluzi flooring ekhishini futhi ephasijini.
Indlela glaze kuvulandi futhi efudumele
Indlela ukuqeda inkohlakalo? Amathiphu ambalwa
Souvlaki: ukuthi kuyini nokuthi ukulungiselela
Okudingekayo: isibonelo izidingo zomuntu. izidingo Kwangempela ngengqondo
"Fitohol": imiyalelo for ukusetshenziswa amaphilisi